I-Induction Heating Theory kunye neTekhnoloji, yintoni into yokufudumeza
Ukutshisa ukunyuka ayinamlilo, ayidibani nokufudumeza indlela enokuthi iguqule icandelo elichazwe ngokuchanekileyo ngentsimbi yentsimbi ebomvu kwimizuzwana. eyenziweyo, yangoku, eddy yangoku) yenziwa kwindawo yokusebenza (izinto eziqhubayo), ubushushu buveliswa njengokuhamba komdyarho wangoku ngokuchasene nokuqina kwezinto.
Ukutshisa ukutshisa Yindlela yokufudumeza ekhawulezayo, ecocekileyo, engangcolisiyo enokusetyenziselwa ukufudumeza isinyithi okanye ukutshintsha iipropathi zezinto ezinokuhanjiswa. Ikhoyili ngokwayo ayitshisi kwaye ifuthe lokufudumeza liphantsi kolawulo. Itekhnoloji ye-transistor eqinileyo yeli lizwe yenze ukuba ukufudumeza kungeniswe kube lula kakhulu, kubize ukufudumeza iindleko kwizicelo zokungenisa i-induction, ukunyanga ubushushu, ukunyibilikisa induction, ukuncipha ngokufanelekileyo, ukwenziwa kwe-induction njl.
Iikhoyili eziyilwe ngokuchanekileyo zenziwe ngokudibeneyo kunye namandla kunye nokuguquguquka kwamandla okuhambisa umbane ukuvelisa iziphumo eziphindaphindayo zokufudumeza ezithile kwisicelo esifunwayo. Ukuhanjiswa kwamandla okwenzelwe ukulinganisa ngokuchanekileyo ukufudumeza kwezinto kunye nokuphendula kutshintsho lwepropathi yento ngexesha lomjikelo wokufudumeza kwenza ukuba kufezekiswe iiprofayili ezahlukeneyo zokufudumeza kwisicelo sokufudumeza esinye.
Injongo ye lokutshisa kunokuba lukhuni isahlulo sokuthintela ukunxiba; yenza iplasitiki yesinyithi yokuqamba okanye yokwenza ishushu ibe yimilo oyifunayo; braze okanye umthengisi iinxalenye ezimbini kunye; nyibilikisa kwaye uxube izithako eziya kwiiallo-ezinobushushu obuphezulu, zenza i-injini zejeet; okanye naliphi na inani lolunye usetyenziso.